Thenga i-Clenbuterol Raw Material kwi-intanethi ngokukhuselekileyo | Yenza i powder eluhlaza
Thenga i-Clenbuterol Raw Material kwi-intanethi ngokukhuselekileyo
/Blog/Clenbuterol/Thenga i-Clenbuterol Raw Material kwi-intanethi ngokukhuselekileyo
ezaposwa ngomhla 11 / 19 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo Clenbuterol. Ibe 4 Comments.
-Yintoni i I-Clenbuterol Raw Material
Umphumo weClenbuterol kunye nefuthe le-Clenbuterol
-Kwenziwa kanjani Thenga i-Clenbuterol Raw Material kwi-intanethi ku khu seleka
-Iyiphi i-Clenbuterol Raw Material
I-Clenbuterol ifumaneka kakhulu kwityuwa ye-hydrochloride okanye i-clenbuterol hydrochloride powder (ipenbuterol HCL powder). Kuhlobo lwepowder emhlophe, esetyenziswe njengento ekhutshweyo yongezwa kwi-excipients ehambelana nayo. Ubomi obusebenzayo beeyure ze-68 kunye nobomi bemizuzu yeeyure ze-36-39. Ubungakanani bawo emzimbeni womntu bude bude kwaye yingako ukwanda kwenyuka kwimizi yesistim elawulwayo. Izinto ze-Clenbuterol HCL zithengiswa ngobungcambu ngaphandle kwe-98%, kunye nokuzinza okukhulu kwe-2years. Xa utshisiwe, malunga ne-95% yalo itholakala ngokukhawuleza emzimbeni womntu.
I-Clenbuterol HCl Ukuhlaziywa kwezinto eziphathekayo:
Igama: Clenbuterol HCL, Clenbuterol Hydrochloride, Clen
Inombolo yeCAS 21898-19-1
I-molecular Formula: C12H19CI3N2O
Isitampu Sokugcina:2-8 ℃
- Impembelelo yeClenbuterol kunye nefuthe le-clenbuterol
Clenbuterol HCL yi-bronchodilator. Yayilungiselelwe ekuqaleni ukugula izifo zokuphefumula ezifana ne-asthma. Kodwa i-Clenbuterol idume kakhulu phakathi kwabakhi bomzimba, ngenxa yoko iyanciphisa ubunzima kwaye inceda ekuphuculeni imisipha. I-Clen isetyenziswe ngabantu abathanda ukulahlekelwa ngamafutha. I-Clenbuterol ngokuyinhloko iphakamisa izinga lentliziyo kunye neqondo lokushisa, ngoko kuphakamisa izinga le-metabolism elikhokelela ekunciphiseni umzimba. I-Clenbuterol yenza njenge-arhente ephindaphindiweyo kwaye ngoko uninzi lwabalimi bomzimba bathanda ukusebenzisa i-clenbuterol.
The iziphumo zecalabuterol ezibonakalayo ziintlungu zesikhumba, kwaye ezinye ziyizanyazuliso, iintloko, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, kunye nesiphithiphithi kunye nokuphakanyiswa kwe-pulse.
-Ukuthenga njani i-Clenbuterol Raw Material kwi-intanethi ikhuselekile
Unga ukuthenga i-clenbuterol online okanye uthenge i-clenbuterol izinto eziphathekayo kwi-intanethi, ngenxa yoko kukho iininzi ezinkulu zeesayithi ezinika i-clenbuterol i-HCl impahla yokurhweba ethengiswayo kunye ne-clenbuterol ekuthengiseni. Kumelwe waziwa ingozi yempilo ojongene nayo xa uthengela unyango lwe-clenbuterol kufuneka ube ukongezwa kwesondlo ukutya kunye nokuzilolonga rhoqo. Kufuneka ugcine engqondweni uxoxe kunye nodokotela wakho ngoko akukho ziphumo ezichaphazelekayo ezikhokelela kwingozi engunaphakade kwimpilo. Kufuneka ukhuseleke ukufumana eli liyeza kwithuba elifutshane ukugcina umjikelezo weenyanga ezintandathu. Emva kokuba ubhale umyalelo kunye neewebhusayithi ongazithengela i-clenbuterol kwi-intanethi. Yaye ukuba wena bathenge i-clenbuterol impahla eluhlaza kwi-intanethi, unokuqaphela ukuba unobungozi obungcolileyo oya kuthi uyenze. Kufuneka uqaphele ukuba yi-geinius clenbuterol izinto eziphathekayo kunye nokucoca akukho ngaphantsi kwe-98%, kungekhona nje into efanayo, Salbutamol/ albuterol (i-CAS No. 18559-94-9) .Ungenza umyalelo omncinci wokuvavanya kuqala, okanye uthenge i-clenbuterol kunye ne-Salbutamol / i-Albuterol kunye nezinto eziluhlaza. Ukuba iqela le-clenbuterol HCL elithembekileyo lithembele kwi-clenbuterol yobutyebi bendalo, abayi kucinga ukubonelela ngesampula okanye I-Salbutamol impahla eluhlaza isampula yamahhala ekuthelekisweni.
Ngokusebenzisa indlela yokuthumela, uya kukwazi ukufumana kwi-1 iveki okanye kwi-10days. Ukuba imithetho yelizwe inikeza imvume yokusebenzisa i-clenbuterol, unokuyisebenzisa ukuphucula imeko yomzimba wakho. Eli gama lifumaneka kwivenkile yezokwelapha kwimigomo kuphela kodwa ezininzi zewebhu zithumela le mayeza emhlabeni wonke. Ngoko ukuba ukhethe indlela ye-intanethi yokuthenga i-clenbuterol, akufuneki ukuba ufuna ukuvelisa umyalelo. Indlela elula kunye nelula yokuthenga i-clenbuterol yi-intanethi. Ukuba ufumana iyeza elisekhompyutheni, uza kubona inani elikhulu lewebhusayithi ezithengisa into kwiindleko zokhuphiswano. Uninzi lwewebhu lukunceda ukuba uthenge le mveliso ngaphandle kokuvelisa nayiphi na imithi. Thenga i-clenbuterol kwi-intanethi inezibonelelo ezininzi.
Iimwebhsayithi ezininzi ezinika i-clenbuterol zixhobo zendalo zivumela zonke iintlobo zeendlela zokuhlawula, ezifana ne-WesternUnion, i-MoneyGram, i-Bitcoin, i-Wire Wire. Kodwa ukuba uthenge i-clenbuterol powder eluhlaza kwi-intanethi, kufuneka uqinisekise ukuba i-website iyinyani okanye ayikho. Kwakhona kubalulekile ukuhlolisisa ukuba ngaba kukunikezela ngemisebenzi ephephile kuba uya kuba unikezela ngolwazi lwakho. Gweba zonke iindlela kunye nesigwebo njengokuba uthengisa ezinye izinto kwiwebhusayithi xa ufuna ukuthenga i-clenbuterol. Kufuneka uqiniseke ukuthelekisa iindleko kwiindawo ezihlukeneyo kwaye ngale ndlela ungayifumana into efanelekileyo. Uyakuzibuza ukubona ukuba ezininzi iziza zinika i-clenbuterol kwiindleko eziphezulu.
tags: bathenge i-clenbuterol HCL impahla, izinto ze-clenbuterol HCL, Clenbuterol eluhlaza
I-4 Impendulo Amazwana
UDkt Patrick Young06 / 24 / 2018 kwi-8: 50 ntambama
Ukukhetha i-AASraw ukuthenga i-clenbuterol yisigqibo esifanelekileyo.
dorito06 / 23 / 2018 kwi-8: 20
Ndizama ukuthenga i-clenbuterol kwi-intanethi, yintoni umthombo ohloniphekileyo kuwo?
UDkt Patrick Young06 / 21 / 2018 kwi-8: 53 ntambama
Kulungile, iinkcukacha zithunyelwe kuwe nge-imeyili
Dario06 / 21 / 2018 kwi-6: 37
Ndifuna ukuthenga i-hcl clenbuterol. Iyintoni intengo ye1kg.
Ndivela eArgentina, ndichithe indleko ngokuthumela.
Imilinganiselo yeHGH: Indlela yokukhetha i dose yeHGH ngokufanelekileyo? I-Oxandrolone ephakamileyo (iAnavar) Ubuninzi obunamandla obuya kubayeni nabasetyhini